My freedom:3Days in Yangon: Sister's Wedding
3 Days in Yangon: Sister's Wedding
ကန်ဒီပျောက်ချက်သားကောင်းဆို ရန်ကုန်ပြန်တာနဲ့... စာမေးပွဲဖြေတာနဲ့... အလုပ်နေရာပြောင်းဖို့ ပြင်ဆင်တာနဲ့ အဲ့လိုအဲ့လိုတွေ ရှုပ်နေလို့ပါ။ စာမေးပွဲဆိုတာက အလုပ်မှာ နှစ်တိုင်းတစ်နှစ်တစ်ခါဖြေရတဲ့ Competency Test... အပိုင်း(၃)ပိုင်းခွဲဖြေရတာ... ပထမဆုံးအပိုင်းတော့ ပြီးသွားပြီ။ ရန်ကုန်ကပြန်ရောက်ရောက်ပြီးချင်း နောက်တစ်နေ့က အဲ့စာမေးပွဲ။ ရန်ကုန်မှာဆို စာလုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တာသိတော့ မသွားခင်ရက်တွေမှာ စာမေးပွဲအတွက် စာအရင်ကြည့်ရတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ စာမရေးဖြစ်တာ။
ကန်ဒီ အလုပ်ပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး... နေရာပဲပြောင်းမှာ။ နောက်နှစ်မှာအသစ်ဖွင့်မယ့် Polyclinic တစ်ခုအတွက် အဲ့ဒါဆောက်လို့မပြီးသေးခင် သူတို့က နေရာတစ်နေရာမှာငှားပြီး ဒီတစ်နှစ်မှာ အစမ်းဖွင့်မယ်ပေါ့။ Boss က ကန်ဒီ့ကို အဲ့ကိုလွှတ်တယ်။ Pharmacy တစ်ခုလုံးကို နေရာသစ်တစ်ခုမှာ အစကနေ လုပ်ရတာဆိုတော့ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့... Workflow ကလည်း အခု Pharmacy နဲ့ သိပ်မတူတော့ဘူး။ Meeting တွေခေါ်... ဇူလိုင်လ(၁)ရက်နေ့ ဖွင့်မှာဆိုတော့ ဟိုမှာဆေးတွေ Stock ဖြည့်နဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့စနေကဆို ညနေ(၄)နာရီမှ အိမ်ပြန်ရတယ်။ လူလည်းယဲ့ယဲ့ပဲကျန်တော့တယ်။ အတွေ့ကြုံသစ်တစ်ခုရတာပေါ့ဆိုပြီး Boss စကားနားထောင်လိုက်တာ။
ဒီပိုစ့်ရဲ့လိုရင်းက ခုမှလာမှာ ဟဟ။ ကန်ဒီရန်ကုန်ပြန်တယ်ဆိုတာ (၃)ရက်တည်းပါ။ ညီမလေး(အလတ်မ)မင်္ဂလာဆောင်အတွက် ပြန်တာ။ သောကြာနေ့ပြန်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်က စနေနေ့၊ တနင်္လာနေ့မနက်ပြန်လာတယ်။ စနေနေ့မနက်ပိုင်းက မင်္ဂလာဆွမ်းကျွေးပေါ့။ ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ နေ့ဆွမ်းကပ်တယ်။
သတို့သမီး (သို့) ညီမလတ်နဲ့...
မိသားစု... (အငယ်ဆုံး မပါ)
အငယ်ဆုံးညီမပုံမပါဘူး။ သူကအခုကလေးနဲ့ဆိုတော့ သိပ်မအားတော့ဘူးလေ။ နောက်ကျမှ ရောက်လာတယ်။ မနက်ပိုင်းဆွမ်းကပ်ပြီးတော့ အိမ်ပြန်... ခဏနား၊ ညပိုင်းကျတော့ Dinner... သူ့အမျိုးသားက တရုတ်ဆိုတော့ တရုတ်လိုဆောင်တယ်။
မနက်ပိုင်းဝတ်စုံရော၊ ညပိုင်းဝတ်စုံရော ကန်ဒီပြတဲ့ဒီဇိုင်းကို အမေကသူ့အသိဆီမှာ အပ်ပေးထားတာ။ အကုန်ကွက်တိပဲ။ အမေနဲ့ညီမလေးကတော့ ညနေ(၃)နာရီလောက်ကတည်းက အလှပြင်ဖို့ အဲ့ကိုသွားကြလေရဲ့။ အမေက ကန်ဒီ့ကို ရန်ကုန်မရောက်ခင်ကတည်းက မိတ်ကပ်ဆရာနဲ့ ပြင်မလား မေးသေးတယ်။ အမေ့ကို မပြင်ဘူးလို့... ကိုယ့်မင်္ဂလာဆောင်လည်း မဟုတ်ဘဲ အဲ့လောက်မလိုဘူးလို့ ဟဟဟ xD
အဖေရော၊ အမေရော၊ ကန်ဒီရော မြန်မာလို ၀တ်တယ်။ ဟိုဘက်က ဘိုလိုဝတ်တယ်။ မိသားစုဓာတ်ပုံရိုက်တော့ သိပ်ကြည့်မကောင်းဘူးပေါ့။ အမေ့ကို မတိုက်ထားကြဘူးလားမေးတော့ အမေက ဘိုလိုမ၀တ်ချင်လို့တဲ့... လူကြီးတွေလည်း ဖိတ်ထားလို့တဲ့။
love yr blouse candy !! it's so pretty on you.
Congratulations to your sis couple btw!!